Wararka Maanta: Arbaco, Nov 24, 2021-General Biixi: In AMISOM dusheenna ku gorgortanto, waa arrin ceeb ku ah dowladnimadeenna iyo Garaadada nagu taxan
General Maxamed Biixi ayaa sheegay Soomaaliya in ay soo dhoweynayso cid kaste oo ka caawinaysa dagaalka cadowgeeda ay kula jirto, laakiin wuxuu sheegay in aanay marnaba u dulqaadan doonin in AMISOM ku goodiso in ay dalka ka baxayso, haddii aan loo yeelin sida ay rabto.
“In korkayaga lagu gorgortamo oo wiilal Afrikaanka laga soo kaxeeyay, ay dusheenna ku gorgortamaan, annaguna aan isku mashquulsannahay, bal macnaheeda dib u fiiriya,” ayuu yiri Gen. Biixi.
Gen. Biixi wuxuu sheegay Soomaalidu in ay iyagu halkaas is dhigeen, oo garan waayeen in ay isku tashadaan oo ay dowladnimadooda ilaashadaan, kana dhiidhiyaan in askari dibadda looga keenay uu u taliyo.
“Nin korkiisa lagu gorgortamayo oo la leeyahay haddii aadan siyaasad hebel ii oggolaan inaan soo faragaliyo ama aadan waxaas isiinin, dalkaaga ka tegi maayo ama waan ka baxayaa, soo waxaan garaadada u sidano bilaash ma ahan,” ayuu raaciyay hadalkiisa Gen Biixi.
Taliyaha ciiddanka lugta wuxuu sheegay in askariga AMISOM uu bishii mushaar ahaan u qaato $1,400, oo ay u u dheer tahay daryeelkiisa iyo cunnadiisa gaarka ah, halka askariga Soomaaliyeed uu qaato lacag aad u yar.